China JKY75 / 65EIII IV-4.0 Vacuum Extruder mpanamboatra sy mpamatsy | Bricmaker
Ity fitaovana modely extruder vacuum ity dia ampiasaina amin'ny biriky na fantsom-panafody. Ary dia taranaka vaovao misy fitaovana mavesatra asa miaraka amin'ny extrusion plastika mafy. Izay mety amin'ny akora simika amin'ny fanary fako, fandrobana, tanimanga, tany, fotaka, shale, arina, lavenona, gangue sns.
Ity masinina ity dia mitambatra amin'ny clutch, reducer, up-level double-shaft agitating extrusion, down-level screw extrusion, vacuum exhaust system sns. Ny dingana miakatra sy midina dia alamina amin'ny endrika "T", ary ny rafitry ny fantsom-bovoka dia milamina misaraka amin'ny motera lehibe ary ampifandraisin'ny fantsom-pifandraisana voaisy tombo-kase. Ny reducer an'ity milina ity dia mampiasa boaty iray manokana ho an'ny nify mafy, izay manatsara be ny fifandraisan'ny nify ary manalava ny androm-piainan'ilay boaty. Ny hazo lehibe dia mandray rafitra hazo mitsingevana, izay maharesy ny lozam-pifamoivoizana mandritra ny fiasana.
Fitsipika miasa: ny ambaratonga ambony an'ny extruder dia ampandehanin'ny motera 160 / 200kW, mitondra ny pnem-pneumatika, ary mamindra amin'ny vatan'ny fampifangaroana ambony amin'ny alàlan'ny reducer manokana hanovana ny hafainganana hahavitana ny fifangaroana, ny fivoahana ary ny fanapahana ny fotaka; dia miditra ao anaty boaty tsy misy fangarony izy ary mamakivaky ny paompy misy fantsona, misintona ny rivotra, ary ny fotaka dia atosiky ny fanotrehana fotaka mankany amin'ny toerana midina. Ny dingana midina dia ampandehanin'ny motera 400 / 450kW handroahana ny pnem-pneumatika, izay ampitaina amin'ny vatan-kazo lehibe amin'ny alàlan'ny reducer amin'ny nify mafy, ary avy eo dia atosiky ny auger amin'ny ambaratonga ambany kokoa, ary aondrina ary atesina ao anaty ny lohan'ny loha sy ny tsimoka.
Vokatra farany Birika matevina / lavaka / sakana, biriky Paver
30 000-50,000 35,000-55,000
Taratasy niandohana Shina
Teo aloha: JKY80 / 70-4.0 Vacuum Extruder
Manaraka: YASKAWA Robot Brick Stacking